लाइभ भिडियो बनाउने लो भमा १ सय ६० फिटमाथिबाट ख सिन्, अ स्प ताल पु ग्नअ घि नै मृ त्यु – List Khabar
Home / समाचार / लाइभ भिडियो बनाउने लो भमा १ सय ६० फिटमाथिबाट ख सिन्, अ स्प ताल पु ग्नअ घि नै मृ त्यु
लाइभ भिडियो बनाउने लो भमा १ सय ६० फिटमाथिबाट ख सिन्, अ स्प ताल पु ग्नअ घि नै मृ त्यु
admin July 24, 2021 समाचार Leaveacomment 35 Views
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला
विद्यालयभित्र गरेको यस्तो घिनलाग्दो हर्कतका कारण ५ शिक्षिकाहरुको जागिर गयो
लोकप्रिय हुने लोभले एक महिलाको ज्यान गएको छ । सिओक्वियुमे नामकी यी चिनियाँ महिला पेसाले टावर क्रेन अपरेटर थिइन् । कामका सिलसिलामा उनी १ सय ६० फिटको उचाइबाट लाइभ भिडियो बनाउँदै थिइन्, त्यहाँबाट खसेपछि उनी घाइते भइन् । यति माथिबाट खस्दा पनि मोबाइल फोन भने उनको हातमै थियो । यी महिलालाई तत्कालै अस्पतालतर्फ लगियो । तर बाटोमै उनको मृत्यु भयो ।
१ लाखभन्दा धेरै फलोअर्स
बेलायती अखबार द सनको रिपोर्ट अनुसार उनले ‘सिओक्वियुमे’ नामबाट सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट खोलेकी थिइन् । जहाँ, उनले आफ्नो जीवनका दैनिक गतिविधि तथा क्रेन सञ्चालनसँग जोडिएको भिडियो पोस्ट गर्ने गरेकी थिइन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै प्रख्यात थिइन् र १ लाखभन्दा धेरै फलोअर्स थिए ।
२३ वर्षकी यी महिला दुई छोराछोरीकी आमा समेत थिइन् । मंगलबार सबै सहकर्मीहरू कामका लागि गएका बेला लाइभ भिडियो बनाउनका लागि क्रेनमा चढेकी थिइन् । यस दौरान उनको खुट्टा चिप्लियो । यद्यपि, मृतक परिवारले यो दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । परिवारले आफ्नी छोरी कामलाई लिएर निकै गम्भीर भएको भन्दै उनले ड्युटीका दौरान भिडियो बनाउन नसक्ने दाबी समेत गरेको छ ।
Previous स्याउको बियाँ र बोक्रा खानुका यति धेरै अचुक फाइदाहरु, जान्नुभयाे भने खान थाल्नुहुनेछ !
Next जाने हैन त इजरायल ? कामदारका लागि परीक्षा लिने तयारी, मासिक तलव नै १ लाख ७० हजार भन्दा माथि
जापान जाने पर्खाइमा रहेको विद्यार्थीको लागि आयो यस्तो खुसीको खबर तुरुन्त हेर्नुहोस्
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जापान जानबाट रोकिएका १३ हजार नेपाली विद्यार्थीलाई ध्यानमा राख्दै कूटनीतिक …
कर्णालीका मन्त्री कुर्मराज शाहीको फेरी अर्को काण्ड